Sidee si ay u gudbiyaan wax kasta ka iPhone in Computer Si fudud
iPhone in Transfer Computer: ka iPhone Bedelka Wax walba si fudud loo Computer
Fursadda in aad rabto in lagu wareejiyo files ka iPhone in computer marka aad badiyay maktabadda Lugood, dhibaato ay ka soo shil kombiyuutarka, computer cusub ama dad kale soo iibsadaan. Nasiib darro, shirkada Apple kuu ogolaanaya in aad waxba dhoofin laakiin photos ee ku giringiriya Camera ah. Si ay u gudbiyaan music, video, xiriirada, fariimaha, ay tahay in aad taageero ka qaar ka mid ah qalabka xisbiga saddexaad barbaro. Halkan, waxaan u soo ururin nasteexooyin waxtar leh iyo tabaha in Eebe idin ka dhigi iPhone in uu ka kaaftoomi kala iibsiga computer si xor ah.
In qaybaha soo socda, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo wareejiyo files ka iPhone in PC. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad u tagi kartaa si iPhone si Mac xarunta talooyin .
1. Connect iPhone
2. Transfer iPhone in PC
2.2 Transfer Photos
SMS 2.3 Transfer
Video 2.4 Transfer
Farriinta codka 2.5 Transfer
2.6 Transfer Xiriir
3. kaabta iPhone
4. Control PC la iPhone
5. iPhone Transfer Tool
1.1 Sidee in ay ku xidhmaan iPhone in computer
Habka caadiga ah waa in furaysto in cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer. Computer ayaa lagu ogaan doonaa oo la aqoonsado aad iPhone ugu dhaqsaha badan.
Fiiro Gaar ah: Tani waa hab lacag la'aan ah in aad nuqulka fariimaha qoraalka ah ka iPhone in Android. Inkasta oo aad ka dhigi karto, aad ku gadaneyso waqti badan. Si ay u fududaato, waxaad isku dayi kartaa xalka labaad.
1.2 iPhone ma xidhiidhinaya computer?
Q1. iPhone ma muujinaya hoos My Computer halka la xiran?
Jawaab: Hubi in aad leedahay sawir ama video ku giringiriya Camera in ay ka soo MMS ama Email ah. Haddii ay sidaas tahay, waxaa fiican in aad email lahaa naftaada iyo badbaadin on your computer, ka dibna waxa ay tirtirto ka iPhone. Markaas, aad iPhone tusi doonaa.
Q2. iPhone aan la aqoonsan yahay ee Lugood on computer Windows? Jawaab: Halkan waxaa ku qoran lix talooyin waxaad isku dayi kartaa.
Dib-u-fur ee USB ah cable iPhone.
Update Lugood in nooca ugu dambeeya.
Hubi in Support Device Apple Mobile la geliyo.
Guuleysatey adeegga Device Apple Mobile.
Hubi in USB Device Apple Mobile ka Driver la geliyo.
Hubi in aad isticmaasho software kale
Wixii faahfaahsan info, fadlan riix halkan .
Articles More aad jeceshahay inaad
Bedelka iPhone Music inay Lugood
Apps ka iPhone wareejiyo Lugood
Jailbreak iPhone 4s la Evasi0n 7
Kaaliyaha Best iPhone aad u
Top 10 Beddelka Lugood
Music Copy in iPhone aan Lugood
Bedelka iPhone Playlists in Lugood
Nidaameed iPhone la Mac
Nuqul Video ka iPhone si Mac
IPhone kaabta si Mac
Bedelka iPhone Music inay Mac
Save iPhone Xiriirada inay Mac
Sida loo badbaadiyo farriinta codka iPhone
Farriinta codka qaadataa fariin qof kasta oo aad ku baaqay in aad marka aan ka jawaabi kartaa. Waxa ay ka kooban looduubay oo aasaasi ah oo horay looduubay oo muuqaal ah. Mararka qaarkood, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in lagu badbaadiyo farriinta codka iPhone, si aad u maqashid dhawaaqa meel kasta iyo waqti kasta. Markaas, sida aad u badbaadin karo farriinta codka? Ma jirtaa xal kasta? Jawaabtu waa HAA gabi ahaanba. Kuwa soo socda ayaa qayb ka mid ah saamiyada aad 2 xal fudud, taas oo u fududahay in aad si ay u gudbiyaan farriinta codka iPhone in computer.
Xalka 1. Transfer farriinta codka iPhone in iCloud Xalka 2. Nuqul iPhone farriinta-codka si computer la Dr.Fone ee macruufka
Xalka 1. Transfer farriinta codka iPhone in iCloud
iCloud kuu ogolaanaya in aad si loo badbaadiyo farriinta muuqaalka ah ka iPhone in hadhaysaa via ay feature gurmad. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah wax aad og tahay in ay tahay in horay looduubay oo si toos ah aan laga daawan karaa ama aad u soo saaro karaan gurmad iCloud iyo wareejiyo computer.
Raac talaabooyinka fudud si ay u gudbiyaan farriinta muuqaalka ah ka iPhone in computer
Tallaabada 1. aad iPhone, u tag Settings oo shid network Wi-Fi.
Tallaabada 2. Tubada Settings> iCloud. Gal ID Apple iyo password aad.
Tallaabada 3. Tubada Kaydinta & kaabta. Daar ee kaabta iCloud.
Tallaabada 4. Tubada OK ka dibna Back Up ka jaftaa Hadda.
Tallaabada 5. Hadda, aad xoojiyaa aad iPhone. Farriimaha muuqaal ah farriinta codka waa in iCloud faylka kaabta.
Xalka 2. Nuqul iPhone farriinta-codka si computer la Dr.Fone ee macruufka
Transfer laga badiyay iyo farriinta codka jira ka iPhone 4 / 3GS in computer.
Waraaqda looduubay oo ka Lugood / iCloud files gurmad u iPhone 5s / 5c / 5 / 4s.
View ceshan ilaa 17 nooc oo file ka gurmad Lugood.
Khatarta-xor ah oo tayo leh waayi maayo.
Tallaabada 1. Iska aad iPhone xiran kombiyuutarka
Ka dib markii la rakibey, ordo Wondershare Dr.Fone ee macruufka ee computer Windows ah. Bareesada in cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka.
Haddii aad qabto wax gurmad ah farriinta in iCloud ama Lugood, fadlan dooro ka soo kabsado Lugood ee kaabta File ama ka soo kabsado iCloud File kaabta . Halkan, waxaan qaadi soo kabsado iCloud sida tusaale. Saxiix in aad ID iCloud Apple iyo password.
Tallaabada 2. Scan iCloud gurmad files
Dhammaan iCloud files gurmad waxaa lagu muujiyey in Windows. Dooro mid ka mid ah halkaas oo doonayay fariimaha aad horay looduubay oo uu badbaadeen oo guji Download . Markaas, guji Scan si gurmad iCloud faylka iskaan.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo farriinta codka kala iibsiga ka iPhone in computer
Waxay qaadataa waqti yar dhammayn sawirka. Marka ay dhamaystiran, waxaad ka arki kartaa natiijo baaritaan ee ay software ah. Dhammaan farriinta in uu lumo ama la jiraan on your iPhone waxaa lagu soo bandhigay qaybaha. On galeeysid bidix, sax horay looduubay oo guji Ladnaansho button in farriinta ka iPhone wareejiyo computer.
Apps Best inay ka iPhone Xakamee Computer
Si aad u hesho yara daalan fadhiya hore ee computer ah oo doonaya in ay iska socdaan, laakiin ma doonayo in aan ka luma kontaroolka kombiyuutarka? Hadda, waa wax sahlan. Waxaa tahay barnaamijyadooda cajiib badan in si fudud loo ka iPhone xakameeyo your computer. In this article, waxaan ku qor soo baxay 8-ada loo xakameeyo your computer Windows. Akhri hordhac kooban iyo ka heli mid aad ugu jeceshahay.
7. Mobile Mouse
8. VNC siladda
App Remote, loogu talagalay shirkadda Apple, waa app xor ah oo si sahlan loo isticmaalo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xakamayso maktabadda Lugood iyo Apple TV, ciyaaro radio Lugood iyo dhagaysan Guddoomiye AirPlay ka iPhone aan ka kaaftoomi kasta. Sidaa daraadeed, waxaad samayn kartaa, update iyo dhagaysan playlists maktabadda Lugood, caleenta iyo xakameeyo Lugood Kulanka maktabadda on TV Apple. Ka sokow, waxaad ka ciyaari kartaa radio Lugood iyo music soo dir hadla AirPlay ka dib markii gacanta lagu Lugood.
Hel badan oo ku saabsan app ee Remote >>
Baro sida loo dhigay ilaa app ee Remote aad iPhone >>
LogMeln waa app oo lacag la'aan ah, oo aad bixisaa helitaanka fog fog si aad PC la iPhone markii WiFi / 3G u rogmatay on. Waxaa qoreysa furayaasha keyboard iyo toobiye mouse, si aad u qor karaa habsami leh sida haddii aad fadhiyeen hore ee aad PC. Ka sokow, waxaad isticmaali kartaa app this si aad u eegto iyo edit files badbaadiyey aad kombuutarka, iyo sidoo kale ordo wax codsiyada aad kombuutarka ka iPhone. Oo waxyaalahaas oo dhan, waxaa la, oo dhan ee aad u baahan tahay oo keliya ee farahaaga.
Baro wax badan oo ku saabsan Logmeln >>
RemoteHD qaadataa Remote in lever sare. Waxay ka dhigaysa mid u super fududahay inaad maamusho warbaahinta iyo codsiyada on PC ka iPhone aan ka kaaftoomi kasta. Sidaa daraadeed, aad haysato mouse wireless keyboard iyo trackpad u PC, oo ay maamulaan / biiro / xirto codsi kasta oo socda kombuutarka. Waa maxay dheeraad ah, waxaa kuu ogolaanaya in aad sii qulquli audio in qalab AirPlay karti ah, iyo sidoo kale Dukumeentiga via email nasato inay ka PC.
Badan oo ku saabsan RemoteHD Baro >>
Dhufsan tahay waa-leeyihiin app si aad u xakameeyo PC ka iPhone. Waxay leedahay keyboard, trackpad multi-taabashada oo gacanta ku editor ah, kaas oo awood kuu inay wax ka bedel iyo qorshee khariidad, ku dar badhamada in hawlaha qaar ka mid ah. Intaa waxaa dheer, waxaa idin tusiyo waxa Chine ayaa la socda, si aad u bedelan kartaa u dhaxeeya si fudud.
Baro wax badan oo ku saabsan kama dhufsan >>
WiFiRemote waxaa loogu tala galay sida app 8-in-1 hago si aad u xakameeyo PC aad iPhone. Waxay bixisaa aad taaban pad, pad qoraalka, keyboard, mouse, warbaahinta hago, user furayaasha configurable iyo pad la bilaabay codsiga. Intaa waxaa dheer, waxa ay taageertaa badan PC fog oo si toos ah uga raadsan kartaa cinwaanka IP ee PC ee. Waxaa koontarooli karin oo dhan kumbiyuutarada ilaa iyo inta network WiFi ku daboolaa.
Baro wax badan oo ku saabsan WiFiRemote >>
TeamViewer waa sida app fiican sida aynu aad heli dhameystiran si aad PC aad iPhone fog. Si aad u isticmaasho app this, aad u baahan tahay si ay u rakibi aad iPhone iyo aad u rakibi version desktop ay PC. Markaas, aad xakamayn kartid PC iyo files wareejiyo iyo PC fog oo dhan in oo dhan, TeamViewer aad bixisaa si sahlan, aamin ah iyo si degdeg ah ay helaan si ay u xakamayso PC ka iPhone.
Baro wax badan oo ku saabsan TeamViewer >>
Sida ay magaceeda soo jeedisay, Mobile Mouse ka shaqeeya sida la trackpad mouse multi-taabashada, xaq u siinayaa in ay gacanta ku your computer la iPhone si fudud aad. Sidaa daraadeed, waxaad samayn kartaa wax kasta oo aad qaban karto mouse caadi ah iyo keyboard, sida raadin bogagga internetka, ciyaaryahanka music gacanta ka iPhone. Ka sokow, waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u ogaan waxa software aad socda waqti kasta oo idin tusiyo fog ku haboon software ah.
Baro More saabsan Mobile Mouse >>
VNC siladda waa app fudud iyo xarrago leh oo loo isticmaali karo oo aad iPhone, kuu qaadan xakameeyo ama PC inta uu iPhone iyo PC ee shabakada ka mid ah. Waxa uu isticmaalaa aad screen iPhone sida touchpad ah, taas oo ka dhigaysa waa mid aad u fudud in aad ku dhacay barta saxda ah. Kala iibsiga sabuurad waa mid aad u siman aad.
Baro wax badan oo ku saabsan VNC siladda >> >
Wax Walba Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Kahor inta Gadashada loo isticmaalo iPhone
Talo & Tricks u Sawirada Sida loo kaabta ka iPhone
iPhone Ringtone sameeyey, samee iPhone Ringtone (iPhone 5 ka mid ah)
Solutions Full si ay u gudbiyaan Xogta laga Phone kasta oo A New iPhone 6s (Plus)
4 siyaabood oo aad sms ka iPhone wareejiyo android
Dhibaatooyinka Calendar iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Blackberry
Raadi Location Service on iPhone
32 Tricks ee muhiimka ah in aad isticmaali karto on Your iPhone / iPad
Sida loo Beddelaan M4V si iPhone (The 6s iPhone / 6s cusub Plus ka mid ah)
> Resource > iPhone > iPhone in Transfer Computer: ka iPhone Bedelka Wax walba si fudud loo Computer